उपेन्द्र यादव र पद्म रत्न तुलाधार मिल्नु पर्ने भो। मंजिल एक और राही दो, फिर प्यार कैसे ना हो?
हामीलाई धोका दिइयो: फोरम सभासद देव
१६ बुँदे सहमतिमा पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा ८ प्रदेश बनाउने सहमति भए पनि अन्तिम समयमा ६ प्रदेशमा गएको भन्दै उनले आक्रोस पोखेका हुन्। .....
'थरुहट र मधेस जल्ने अवस्थामा छ। जनकपुर मन्दिरमा प्रसाद चढाएर त्यही खाएर मधेसलाई पुग्छ?'
...... तीन दलका नेताले फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षको विजयकुमार गच्छदारले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरिरहेको उनको भनाई छ। .... उनले भने, 'यदी जनताको भावना अनुसार तीन दलले अहिलेको नक्सालाई परिमार्जन गर्ने कार्य भएन भने हामी यसमा सहमत हुन सक्दैनौँ।'अहिलेको नक्सामा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्ने उनको माग छ। ....... 'केही नेताले आफ्नो गोजीको खेलौना जसरी जिल्लालाई यता र उता पार्ने अधिकार कस्ले दियो? कैलाली कन्चनपुरलाई थरुहटबाट हटाउने अधिकार कस्ले दियो? कैलालीमा आज आन्दोलन जारी छ।'
आमसञ्चारका माध्यमले थरुहटको आन्दोलनबारे समाचार सम्प्रेषण नगरेको भन्दै उनले आक्रोस समेत पोखे।
थरुहट माग्दै अनिश्चितकालीन बर्दिया बन्द
थारु कल्याणकारिणी सभा सङ्घर्ष समिति, बर्दियाले आजदेखि अनिश्चितकालीन बर्दिया बन्दको घोषणा गरेको छ । कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको थरुहट भूमिलाई थरुहट स्वायत्त प्रदेश बनाउनुपर्ने माग राखेर अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेको हो । .... बन्दका कारण यातायात पूर्णरुपमा ठप्प भएको छ । बन्दका कारण बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियालगायत व्यापारिक केन्द्रहरु राजापुर, भूरिगाउँ, ताराताल, मैनापोखर, बाँसगढी पूर्णरुपमा बन्द रहेका छन् । यातायात र बजारसँगै शिक्षण संस्था र कलकारखानासमेत ठप्प रहेका छन् । .... २६ गतेदेखि अनिश्चितकालीन बर्दिया बन्द, २७ गते बर्दिया जिल्लाको चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा जनपरिचालन तथा कोणसभा र २८ गते सदरमुकाम गुलरियामा जनसभाको आयोजना गरिने .....
आफूहरुले शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आन्दोलन गर्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हस्तक्षेप गरिएमा आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिने
Constituent assembly constitution federalism janajati madhesi Nepal padma ratna tuladhar Upendra Yadav